Ukuxoxa ngeVidiyo nge-random umdibaniselwano
Ngoncedo lwenkonzo enjengokuthi "Ingxoxo yevidiyo kunye nomnxibelelwano ongathandabuzekiyo" unokuxoxa ngokusebenzisa ikhamera yewebhu kunye nomntu ukusuka kwinqanaba leplanethi yethu ngexesha langempela. Emva kokuba le nto intsha ithatha abasebenzisi beprogram ngokungaqhelekanga kwayo, kuba kunomdla kakhulu ukuthetha nomntu osuka kwenye idolophu okanye nakwilizwe.
Ukusebenzisa ingxoxo yevidiyo, ucelwa ukuba ubhalise, kuthatha imizuzu embalwa yexesha lakho. Ngaphambi kokubhalisa, unokuonwabela ukuzonwabisa ngekhamera yewebhu!
Ingxoxo enkulu ye-TOP yevidiyo. Akukho zipapasho. Kukho imodeli ye-Premium. Unokukhetha i-interlocutors kwizixeko kunye namazwe. Ewe, anditsho ukuba khona ungathenga ikhowudi uze unike umntu ukufikelela kweNkulumbuso.
Kukho ingxoxo yombhalo kunye neqela elikhulu lemibuzo kunye namantombazana.
Ingxoxo GYR-GYR! Ingxoxo yevidiyo isekelwe kwi-injini yeklasi evela kwi-mail.ru, ifakwe nje kwiphepha. Eli phepha libekwe njengengxoxo yevidiyo yaseKazakh, kodwa akukho mntu uphazamisa ukufumana umxhasi ovela eRashiya okanye eUkraine. Iwindow efanelekileyo yokubukela umnxibelelwano, iqhosha le-alamu, yonke into ifanele ibe.
Le ngxoxo ingxoxo yengxoxo yaseRussia rhoqo kwaye iyindlela yokunxibelelana nolutsha olutsha. Le ngxoxo ilula ngokwaneleyo. Iifestile ezimbini zivumela ukuba uzibonele kunye nomnxibelelwano wakho kwisikrini somlindo wakho. Emva koko, kukho iwindi yokuthumela umyalezo kumnye umntu okanye omnye umntu.
Kwakhona, unokwenza uphawu lwesini sakho, kunye nesini se-interlocutor oyifunayo, ngoko ukukhangela kuya kuphelelwa kwidatha oyinike yona.
Le sayithi ikunika ithuba lokuthetha kunye ne-webcam ngexesha elifanayo kunye nabaninzi be-interlocutors ngaphandle kokubhalisa. Kule ndawo ungakhetha i-avatar yakho, ucacise ngesini, iminyaka kunye nesixeko. Ngama-parameters ofanayo, unokukhetha umntu onxibelelana naye.
Le sayithi kunye nazo zonke ezinye iingxoxo zevidiyo zinika ithuba lokuthetha nabantu abatsha abanomdla kunoma yimuphi umzi weplanethi yethu. Le sayithi kufuneka uhambe, ukuba ungalindelanga ukuvumela ukufikelela kwimakrofoni kunye nekhamera yewebhu yekhompyutha yakho. Ukubhalisa kule ndawo, kufuneka ufake idilesi yakho ye-imeyile kwaye unike iphasiwedi yokungena ngemvume, ngoko unokukhetha unxibelelwano othakazelisayo.
Le ndawo inemithetho yayo, ngoko ke, kuyimfuneko ukuba ujwayelane nayo, ukuze ungaphazamisi. Ungongeza kwakhona abahlobo obathandayo kubahlobo bakho, bakhuthaze, oko kukuthi, ukuncoma, okanye ngokulandelanayo, ukukhalaza ngokuziphatha kakubi kumodareyitha wesayithi.
Le sicelo "Ingxoxo yeVidiyo kunye ne-interlocutor" ingakunceda ukuba ufumane abahlobo abatsha okanye ukuba ube nexesha elihle. Konke okufunekayo kuwe kukuxhuma ikhamera yewebhu kwaye cinezela iqhosha "qalisa". Emva koko, isicelo esikhethwe kuwe iqabane. Ukuba iqabane lingakuthandi, unokuqhubeka ucinga omnye umntu.
Le sicelo ayinawo amodareyitha, ngako-ke kulo mzekelo awuyi kuba nokuzikhusela kumabonakalo angabonwa ngabantu abangaphezu kweminyaka eyi-18. Njengamanye amagumbi okuxoxa, unokutshintshana ngokukhawuleza imiyalezo yombhalo.
Esi sicelo safa kwakhona, kwaye abantu basuka kuyo baye kwezinye iinkonzo.
Le vidiyo ijoliswe ekunxibelelaneni nge-webcam. Akukho nto engabonakaliyo - iifestile ezimbini zevidiyo, iwindi yokuthumela imiyalezo kumnxibelelwano, kunye nokukwazi ukukhangela unxibelelwano olutsha. Kulula kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni ukubhaliswa kwangaphambili.
I-Videochat - roulette, ikunika ithuba lokuthetha nabantu abatsha, ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Emva kokuba ubhalise kwisayithi, ungaqalisa uqhagamshelwano ngokuchofoza "ukukhangela iqhosha lokuxhumana". Kwakhona kule ndawo ungabuka iiprofayili zomsebenzisi wevidiyo, eziza kukukhetha ukhetho lomntu.
Esi siza senziwe ngesiNgesi, ngoko ke, abasebenzisi abangenalo ulwazi lwesiNgesi baya kufumana kunzima ukuqonda amacandelo encoko yevidiyo. I-Videochat kunye nayo yonke into ikuvumela ukuba utshintshe imilayezo yombhalo, kunye nokubonana nomnxibelelwano ngexesha langempela.
Ingxoxo yevidiyo "Masithethe" ikuvumela ukuba uxoxe nabantu abangaqhelekanga ukusuka kwiphina iplanethi yethu. Unokwenza oku ngentetho, imakrofoni okanye i-webcam. Inkonzo yale ndawo iyilula, kwaye ayifuni ukufundwa kwenkqubo yokuxoxa kunye neyongeziweyo.
Ngokunqakraza "thola iqhosha lokungena" ungaqala ukuthetha. Kwakhona, "Masithethe" inikezela kunye noonxibelelwano kubasebenzisi beVkontakte, kodwa oku kuya kufuneka ukuba ubhalise. Ukuthetha kule ndawo kulula kwaye kuyamnandi!
Le ngxoxo ingumlinganiso waseRashiya wokuxoxisana ne-roulette, inkonzo eyaziwayo kakhulu yokuzonwabisa ngokukhawuleza kwevidiyo. Akulungele ukubhalisa ngaphambi kokuba uqale uqhagamshelwano, kunye nokuba awuvumeli ukufikelela kwimakrofoni kunye nekhamera yewebhu-kuya kufuneka ushiye le ndawo.
Ngokuqhelekileyo, ingxoxo iyilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, akukho nto engabonakaliyo kweso siza, ngoko umqali oza kuqalisa ngokukhawuleza i-device ye-chat roulette.